कोरियामा ८ ब’र्ष उमेरकाले पार्कि’ङमा राखिएको ट्रक ४० मिनेटसम्म कु’दाएपछि – Eps Sathi
September 8, 2021 428
दक्षिण कोरियामा एक ८ बर्षकाले ट्रक च लाएको भि’डियो बा’हिरिएको छ। रो डमा अ’स्व’भावि क रुपमा ट्रक कु’दे को देखेपछि मानिसहरुले प्र’ह’ रीलाई यसबारेमा ख’ब र गरेका थिए। उनिहरुले ट्रकलाई प’छ्या उँदै गएर ड्राइभरलाई स’मा ए का थिए। तर जब ड्राइभर मात्र ८ बर्षका मात्र भएको पाइयो सबैजना छ’क्क परे।
ति ८ बर्षकाले ब्य’स्त सडकमा करिब ५० मिनेट ट्रक चलाएका थिए। रोड स’र्भिलेन्स फु’टैजमा देखिएको भि’डि यो अनुसार उक्त ट्रक थेजनमा रहेको एउटा अ पार्टमेण्टको छेउबाट नि’स्केको दे खिन्छ। पार्क गरि राखिएको उक्त ट्रक अ पार्टमेन्ट क्षेत्रबाट विस्तारै नि स्केर व्य’स्त सडकमा अ’स्व’भा वि क रुपमा गु डेको दे ख्न सकिन्छ।
तर अ’चम्म लाग्दो कुरा त्यस ट्रकमा एक ८ बर्षिय हुन्छन र उनले गाडीलाई दोङथेगु तर्फ लिएर हि डेका हुन्छन। यो ठाउँ अपार्टबाट करिब १० किलोमिटर टाढा पर्दछ। करिब ५० मिनेटको अ’स्व’भा वि क रुपमा गाडी च लाएपछि ति ८ बर्षिय र ट्रकलाई प्र’ह’ रीले स’मा उँदछ। बा’लकको उ मेरका कारण उनलाई केहि का’र बा’हि भने हुँदैन र तिनलाई उसको अभिभावको जि म्मा लगाइएको छ।
जब ट्रकका मालिकले ति बा ल’कले च लाएको भन्ने थाहा पाए उनि पनि अ’च’म्मि त हुन पुगे। उनले भने “ट्रक यति सानो ब’ च्चाले च लाएको भन्ने कुरा थाहा पाउँदा म एकदमै अ’च’ म्मित भएँ। म झ ण्डै रु’न पुगें। यति सानो ब’ च्चाले यत्रो ट्रक त्यति टाढासम्म कसरी च लायो भनेर एकद मै आ’श्च’र्य लागेको छ।” ट्रकका मा लिकले भने। तर भा’ग्यवस यसमा कसैलाई पनि केहि नो’क्स ‘नी भने हुन पाएन।
Prevकोरियामा रोलेक्स घडी किन्न मानिसहरु विहानैदेखि लाइनमा, किन यसको आकर्षण बढ्दो छ?
Next२२ बर्षअघि हङकङमा भएको फुटबलमा जब नेपाली खेलाडीलाई मलेशियाका खेलाडीले हात हाले, तब खेल हेरिरहेका नेपाली दर्शकले..
आजसम्म कतिले भरे महिला लघुवित्तको आइपिओ? कति पर्ने भयो त?